ပထမဆုံး ဆီးဂိမျး Esports မှာ ဘယျသူတှေ ရှတေံဆိပျ ရရှိသှားခဲ့လဲ? – Gaming Noodle
ပထမဆုံး ဆီးဂိမျး Esports မှာ ဘယျသူတှေ ရှတေံဆိပျ ရရှိသှားခဲ့လဲ?
၂၀၁၉ အရှတေ့ောငျအာရှအားကစားပွိုငျပှဲကွီး (ဆီးဂိမျး) ရဲ့ Esports ရှတေံဆိပျဆုရှငျမြားကတော့ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါပွီ။ Esports ကို medal event အနနေဲ့ ကငျြးပတာ ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈလို့ ယခုရှတေံဆိပျဆုရှငျမြားဟာလညျး အီလကျထရောနဈအားကစားသမိုငျးမှာ ဦးဦးဖြားဖြား ရှရေရှိသူမြားအဖွဈ မျောကှနျးတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဆီးဂိမျးအတှငျး ထညျ့သှငျးကငျြးပခဲ့တဲ့ Esports အမြိုးအစားမြားကတော့ MLBB, Hearthstone, AoV, Dota 2, StarCraft II နဲ့ Tekken7တို့ပါ။
MLBB: Sibol – MLBB (ဖိလဈပိုငျ)
ဆီးဂိမျး MLBB ပွိုငျပှဲ နောကျဆုံးနကေို့ ဒီဇငျဘာလ ၈ ရကျနကေ့ ကငျြးပပွီးစီးခဲ့ပွီး အိမျရှငျ ဖိလဈပိုငျအသငျး Sibol က ရှတေံဆိပျဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဖိလဈပိုငျကစားသမား Kenji, KarlTzy, Ribo, Haze, Lusty, Pheww နဲ့ Jay တို့ ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Sibol ဟာ အငျဒိုနီးရှားအသငျးကို ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ ၃ ပှဲနိုငျ ၂ ပှဲရှုံး (၃-၂) နဲ့ အနိုငျရရှိသှားခဲ့တာပါ။
Lower Bracket က တကျလာခဲ့ရတဲ့ ဖိလဈပိုငျအသငျးဟာ အငျဒိုနီးရှားအသငျးကို အနိုငျရဖို့ အကွိတျအနယျကစားခဲ့ရပါတယျ။ ဂရငျးဖိုငျနယျ ပထမဆုံးပှဲရဲ့ ဂိမျးအစောပိုငျးမှာ ဖိလဈပိုငျးအသငျးဟာ အသာစီး မရပဲ ရုနျးကနျနခေဲ့ရတာပါ။ ဒါပမေယျ့ lane ကို split push လုပျနခေဲ့တဲ့ Chou ရောကျရှိလာခြိနျ ၁၂ မိနဈမှာတော့ အငျဒိုနီးရှားတဈသငျးလုံး ကရြှုံးသှားပွီး ဖိလဈပိုငျအသငျးက တဈပှဲအနိုငျနဲ့ စတငျဦးဆောငျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယပှဲမှာတော့ အခွအေနမေကောငျးတဲ့ draft ကွောငျ့ ဖိလဈပိုငျတို့ ပွနျလညျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ တတိယပှဲကို ဖိလဈပိုငျတို့ ပွနျလညျအနိုငျရပွီးနောကျ စတုတ်ထပှဲကို အငျဒိုနီးရှားက ပွနျအနိုငျရခဲ့ပါသေးတယျ။ ပဉ်စမမွောကျနောကျဆုံးအဆုံးအဖွတျပှဲမှာမှ ဖိလဈပိုငျက တဈပှဲအသာနဲ့ အနိုငျရသှားခဲ့တာဖွဈလို့သာ အပွိုငျအဆိုငျကစားနိုငျစှမျးရှိတဲ့ အငျဒိုနီးရှားဟာ ရှတေံဆိပျနဲ့ ကပျခါသီခါ လှဲခြျောသှားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Hearthstone: Dr Yew Weng Keng (မလေးရှား)
ဆီးဂိမျး Hearthstone ပွိုငျပှဲမှာတော့ မလေးရှားကစားသမား Dr Yew Weng Keng က ရှတေံဆိပျရရှိ ဗိုလျစှဲခဲ့ပါတယျ။ ဆီးဂိမျး Hearthstone ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ Weng Keng ဟာ ထိုငျးကစားသမား Werit Popan ကို ၃-၁ နဲ့ အနိုငျရပွီး မလေးရှားနိုငျငံအတှကျ ပထမဆုံး Esports ရှတေံဆိပျကို ရယူပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ရှတေံဆိပျဆုရှငျ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ Dr Yew Weng Keng ဟာ electronic engineering ဘာသာရပျနဲ့ PhD ဘှဲ့ ရရှိထားသူပါ။ မလေးရှားနိုငျငံ Heriot-Watt တက်ကသိုလျရဲ့ လကျထောကျပါမောက်ခတဈဦးလညျးဖွဈသူ Weng Keng ကို Esports လောကမှာတော့ wkyew90 အဖွဈ လူသိမြားကွပါတယျ။ ဂိမျးနဲ့ ပတျသတျလို့ ရှေးရှိးစှဲအယူအဆမြား မရှိပဲ ထူးခြှနျလှတဲ့ Weng Keng တဈယောကျတော့ ဆီးဂိမျးမှာ အမိနိုငျငံ မလေးရှားရဲ့ ဂုဏျကို ဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
AoV: Workpoint Fighting Fish (ထိုငျး)
ဆီးဂိမျး AoV ပွိုငျပှဲမှာတော့ ထိုငျးအသငျး Workpoint Fighting Fish ဟာ အငျဒိုနီးရှားအသငျးကို ၃-၀ အပွတျနဲ့ အနိုငျရပွီး ရှတေံဆိပျကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဆှတျခူးသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ KiNESiS, BlueNP, NongTee, Gzy နဲ့ Chitawan တို့ ပါဝငျတဲ့ ထိုငျးအသငျးဟာ ဂရငျးဖိုငျနယျမတိုငျမီက အငျဒိုနီးရှားကို ၁-၂ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ထားခဲ့သေးတာမို့ ထိုငျးအသငျးရဲ့ တဈကြော့ပွနျအကောငျးဆုံးကစားနိုငျစှမျးဟာ ထူးခွားလှပါတယျ။
ဒီရှတေံဆိပျကတော့ ထိုငျးနိုငျငံအတှကျ ပထမဆုံး Esports ရှတေံဆိပျပါ။ ဂရငျးဖိုငျနယျ ပထမဆုံးပှဲမှာ ထိုငျးအသငျးကို အနိုငျရဖူးတဲ့ အငျဒိုနီးရှားဟာ ယခငျပှဲတှလေိုပဲ ဖိအားပေး ကစားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပှဲရဲ့ ဒုတိယပိုငျးက စ လို့ ထိုငျးအသငျးက စတငျ လကျစှမျးပွနိုငျခဲ့ပွီး အနိုငျရသှားခဲ့ပါတယျ။ ထငျမှတျမထားတဲ့ ထိုငျးအသငျးရဲ့ ကစားကှကျမြားကို အငျဒိုနီးရှားဟာ ပွနျလညျခုခံခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယပှဲနဲ့ တတိယပှဲမြားကိုပါ အရှုံးပေးလိုကျရပွီး ထိုငျးတို့ ရှတေံဆိပျဆုရှငျမြား ဖွဈလာခဲ့ကွပါတယျ။
Dota 2: Sibol – Dota2(ဖိလဈပိုငျ)
ဆီးဂိမျး Dota2ပွိုငျပှဲမှာ အိမျရှငျ ဖိလဈပိုငျအသငျး Sibol က ထိုငျးအသငျးကို ၃-၂ နဲ့ အနိုငျရပွီး ၂ခုမွောကျ Esports ရှတေံဆိပျကို ဆှတျခူးသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဖိလဈပိုငျအသငျး Sibol ရဲ့ Dota2ကစားသမားမြားကတော့ MDL Chengdu Major ပွိုငျပှဲဝငျအသငျး Team Adroit က ချေါယူထားတဲ့ Natsumi-, Mac, Bok, Boombacs နဲ့ cml တို့ဖွဈကွပွီး အရံကစားသမားအဖွဈ Cignal Ultra ရဲ့ Erice နဲ့ Van တို့ ပါဝငျပါတယျ။
ဖိလဈပိုငျအသငျးက အနိုငျရခဲ့တဲ့ ထိုငျးအသငျးမှာ Fnatic ရဲ့ ကစားသမား Jabz နဲ့ 23savage တို့လို နာမညျကွီး ကစားသမားမြား ပါဝငျပါတယျ။ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျလှတဲ့ Dota2မှာ ယခုလို ရှတေံဆိပျရရှိနိုငျဖို့ ဖိလဈပိုငျအသငျးဟာ လကေ့ငျြ့မှုမြားနဲ့ ပွငျဆငျမှုမြားစှာ ပွုလုပျထားခဲ့တာပါ။
ရှတေံဆိပျရသှားခဲ့တဲ့ ဖိလဈပိုငျ Dota2အသငျးနဲ့ မွနျမာအသငျး Team Veteran တို့ဟာ အုပျစုပှဲမြားအတှငျး တှဆေုံ့ကစားခဲ့ပါသေးတယျ။ ဆီးဂိမျး Dota2ပွိုငျပှဲအတှငျး မွနျမာအသငျးဟာ ကံမကောငျးစှာ အုပျစုအဆငျ့နဲ့ပဲ ကနြေပျခဲ့ရပမေယျ့ ဖိလဈပိုငျအသငျးကို ၁-၁ နဲ့ အပွိုငျအဆိုငျကစားနိုငျခဲ့ပွီး မခကွေောငျး ပွသထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Starcraft II: Cavair “EnDerr” Acampado (ဖိလဈပိုငျ)
ဆီးဂိမျး Starcraft II ပွိုငျပှဲမှာ ဖိလဈပိုငျကစားသမား Cavair “EnDerr” Acampado က အနိုငျရပွီး နိုငျငံအတှကျ ၃ခုမွောကျ Esports ရှတေံဆိပျကို ရယူပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဂရငျးဖိုငျနယျမှာ EnDerr ဟာ ပွိုငျဘကျ စငျကာပူကစားသမား Blysk ကို ၄-၁ နဲ့ အနိုငျရခဲ့တာပါ။
ပထမဆုံး ၂ ပှဲကို အနိုငျရပွီး ဦးဆောငျကစားသှားနိုငျတဲ့ EnDerr ဟာ တတိယပှဲမှာသာ မရှုံးနိမျ့ခဲ့ရငျ ၃ ပှဲပွတျနဲ့ အနိုငျရသှားနိုငျပါတယျ။Blysk ဟာ EnDerr ရဲ့ rushed playstyle ကို ခုခံနိုငျဖို့ တတိယမွောကျပှဲမှာ playstyle ပွောငျးလဲကစားခဲ့ပါတယျ။ အကွိတျအနယျကစားခဲ့ကွတဲ့ တတိယပှဲအဆုံးမှာ Blysk က တဈပှဲပွနျလညျအနိုငျရလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ နောကျဆုံး ၂ ပှဲမှာတော့ EnDerr ရဲ့ နညျးဗြူဟာမြားဟာ Blysk ထကျ သာလှနျနခေဲ့သလို ပွိုငျဘကျရဲ့ base ကို အနိုငျရဖို့ Zergs အရအေတှကျမြားပွားအောငျလညျး စှမျးဆောငျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ EnDerr ကို အနိုငျပေးလိုကျရတဲ့ Blysk ဟာ ငှတေံဆိပျနဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရပါတယျ။
Tekken 7: Nopparut “Book” Hempamorn (ထိုငျး)
ဆီးဂိမျးရဲ့ နောကျဆုံးပိတျ Esports ပှဲဖွဈတဲ့ Tekken7မှာ ရှတေံဆိပျရရှိခဲ့သူကတော့ ထိုငျးကစားသမား Nopparut “Book” Hempamorn ပါ။ Book ဟာ ပွိုငျဘကျ အိမျရှငျဖိလဈပိုငျကစားသမား AK ကို ၃-၂ နဲ့ အနိုငျရရှိပွီး ထိုငျးနိုငျငံအတှကျ ၂ခုမွောကျ Esports ရှတေံဆိပျကို ရယူပေးနိုငျခဲ့တာပါ။
ဆီးဂိမျး Tekken7ဂရငျးဖိုငျနယျရဲ့ ပထမ ၃ ပှဲဟာ Akuma mirror match မြားပါ။ ပထမဆုံးပှဲကို AK က အနိုငျရရှိခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယနဲ့ တတိယပှဲမြားမှာတော့ Book က နိုငျသှားခဲ့ပါတယျ။ စတုတ်ထပှဲမှာ AK ဟာ Shaheen အဖွဈ ပွောငျးလဲကစားခဲ့ပွီး ပွနျလညျအနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။
ပဉ်စမွောကျနောကျဆုံးအဆုံးအဖွတျပှဲမှာတော့ last-minute attack အတှကျ လောနခေဲ့တဲ့ AK ကို Book က ကပျခါသီခါအနိုငျရသှားခဲ့ပွီး ဆီးဂိမျး Esports အတှကျ နောကျဆုံးပိတျ ရှတေံဆိပျကို ဆှတျခူးသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဆီးဂိမျး Esports မှာ ငှတေံဆိပျနဲ့ ကွေးတံဆိပျရရှိသှားကွတဲ့ နိုငျငံနဲ့ ကစားသမားမြား စာရငျးကတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈကွပါတယျ။
MLBB ငှတေံဆိပျ – အငျဒိုနီးရှား (Adriand Larsen Wong, Eko Julianto, Gustian, Muhammad Ridwan, Teguh Imam Firdaus, Yurino Putra)
MLBB ကွေးတံဆိပျ – မလေးရှား (Ahmad Ali Huzaifi Abdullah, Abdul Wandi Abdul Kadir, Jamil Nurolla, Izme Haqeem Hamsjid, Muhammad Hazeem Onn, Mohd Faris Zakaria)
Hearthstone ငှတေံဆိပျ – ထိုငျး (Werit Popan)
Hearthstone ကွေးတံဆိပျ – စငျကာပူ (Chew Khai Kiat)
AoV ငှတေံဆိပျ – အငျဒိုနီးရှား (Farhan Akbari Ardiansyah, Gilang Dwi Falah, Hartanto Lius, Hartawan Muliadi, Satria Adi Wiratama)
AoV ကွေးတံဆိပျ – ဗီယကျနမျ (Đỗ Thành Hưng, Huỳnh Trọng Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Phương Nguyên, Nguyễn Vũ Hoàng Dũng, Vương Trung Khiên)
Dota2ငှတေံဆိပျ – ထိုငျး (Anucha Jirawong, Anurat Praianun, Pipat Prariyachat, Nopparit Prugsaritanon, Thanathorn Sriiamkon, Nuengnara Teeramahanon, Poomipat Trisiripanit)
Dota2ကွေးတံဆိပျ – ဗီယကျနမျ (Huỳnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Châu Lợi, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Thành Đạt, Trịnh Văn Thọ)
Starcraft II ငှတေံဆိပျ – စငျကာပူ (Thomas Maria Kopankiewicz)
Starcraft II ကွေးတံဆိပျ – ဗီယကျနမျ (Trần Hồng Phúc)
Tekken7ငှတေံဆိပျ – ဖိလဈပိုငျ (Alexandre Gabrielle Laverez)
Tekken7ကွေးတံဆိပျ – ဖိလဈပိုငျ (Andreij Hosea Albar)
အိမျရှငျ ဖိလဈပိုငျတို့ဟာ ဆီးဂိမျး Esports မှာ ရှတေံဆိပျ ၃ခု၊ ငှတေံဆိပျ ၁ခုနဲ့ ကွေးတံဆိပျ ၁ခု ရယူနိုငျခဲ့လို့ ရှတေံဆိပျအမြားဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ ထိုငျးက ရှေ ၂ခုနဲ့ ငှေ ၂ခု၊ မလေးရှားက ရှေ ၁ခုနဲ့ ကွေး ၁ခု၊ အငျဒိုနီးရှားက ငှေ ၂ခု၊ စငျကာပူက ငှေ ၁ခုနဲ့ ကွေး ၁ခု၊ ဗီယကျနမျက ကွေး ၃ ခု အသီးအသီး ဆှတျခူးထားနိုငျခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့မှာပါ။
ထိုငျးဟာ Esports ရှတေံဆိပျ ၂ခုရခဲ့လို့ ဖိလဈပိုငျပွီးရငျ ဒုတိယမွောကျ Esports ရှတေံဆိပျအမြားဆုံးရတဲ့နိုငျငံအဖွဈ မှတျတမျးတငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ Esports သမိုငျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ ထူးခွားလှတဲ့ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမျး Esport ပှဲမြားကတော့ ပွီးဆုံးသှားခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြ ရှိပါတယျ။
ပထမဆုံး ဆီးဂိမ်း Esports မှာ ဘယ်သူတွေ ရွှေတံဆိပ် ရရှိသွားခဲ့လဲ?
၂၀၁၉ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကြီး (ဆီးဂိမ်း) ရဲ့ Esports ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်များကတော့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ Esports ကို medal event အနေနဲ့ ကျင်းပတာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လို့ ယခုရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်များဟာလည်း အီလက်ထရောနစ်အားကစားသမိုင်းမှာ ဦးဦးဖျားဖျား ရွှေရရှိသူများအဖြစ် မော်ကွန်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆီးဂိမ်းအတွင်း ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ Esports အမျိုးအစားများကတော့ MLBB, Hearthstone, AoV, Dota 2, StarCraft II နဲ့ Tekken7တို့ပါ။
MLBB: Sibol – MLBB (ဖိလစ်ပိုင်)
ဆီးဂိမ်း MLBB ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ကို ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီး အိမ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင်အသင်း Sibol က ရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမား Kenji, KarlTzy, Ribo, Haze, Lusty, Pheww နဲ့ Jay တို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Sibol ဟာ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ ၃ ပွဲနိုင် ၂ ပွဲရှုံး (၃-၂) နဲ့ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါ။
Lower Bracket က တက်လာခဲ့ရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အသင်းဟာ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို အနိုင်ရဖို့ အကြိတ်အနယ်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ ဂရင်းဖိုင်နယ် ပထမဆုံးပွဲရဲ့ ဂိမ်းအစောပိုင်းမှာ ဖိလစ်ပိုင်းအသင်းဟာ အသာစီး မရပဲ ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် lane ကို split push လုပ်နေခဲ့တဲ့ Chou ရောက်ရှိလာချိန် ၁၂ မိနစ်မှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားတစ်သင်းလုံး ကျရှုံးသွားပြီး ဖိလစ်ပိုင်အသင်းက တစ်ပွဲအနိုင်နဲ့ စတင်ဦးဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပွဲမှာတော့ အခြေအနေမကောင်းတဲ့ draft ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့ ပြန်လည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယပွဲကို ဖိလစ်ပိုင်တို့ ပြန်လည်အနိုင်ရပြီးနောက် စတုတ္ထပွဲကို အင်ဒိုနီးရှားက ပြန်အနိုင်ရခဲ့ပါသေးတယ်။ ပဉ္စမမြောက်နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ်ပွဲမှာမှ ဖိလစ်ပိုင်က တစ်ပွဲအသာနဲ့ အနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်လို့သာ အပြိုင်အဆိုင်ကစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဟာ ရွှေတံဆိပ်နဲ့ ကပ်ခါသီခါ လွဲချော်သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Hearthstone: Dr Yew Weng Keng (မလေးရှား)
ဆီးဂိမ်း Hearthstone ပြိုင်ပွဲမှာတော့ မလေးရှားကစားသမား Dr Yew Weng Keng က ရွှေတံဆိပ်ရရှိ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ဆီးဂိမ်း Hearthstone ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ Weng Keng ဟာ ထိုင်းကစားသမား Werit Popan ကို ၃-၁ နဲ့ အနိုင်ရပြီး မလေးရှားနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး Esports ရွှေတံဆိပ်ကို ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် Dr Yew Weng Keng ဟာ electronic engineering ဘာသာရပ်နဲ့ PhD ဘွဲ့ ရရှိထားသူပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံ Heriot-Watt တက္ကသိုလ်ရဲ့ လက်ထောက်ပါမောက္ခတစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ Weng Keng ကို Esports လောကမှာတော့ wkyew90 အဖြစ် လူသိများကြပါတယ်။ ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ရှေးရှိးစွဲအယူအဆများ မရှိပဲ ထူးချွန်လှတဲ့ Weng Keng တစ်ယောက်တော့ ဆီးဂိမ်းမှာ အမိနိုင်ငံ မလေးရှားရဲ့ ဂုဏ်ကို ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
AoV: Workpoint Fighting Fish (ထိုင်း)
ဆီးဂိမ်း AoV ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ထိုင်းအသင်း Workpoint Fighting Fish ဟာ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို ၃-၀ အပြတ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး ရွှေတံဆိပ်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ KiNESiS, BlueNP, NongTee, Gzy နဲ့ Chitawan တို့ ပါဝင်တဲ့ ထိုင်းအသင်းဟာ ဂရင်းဖိုင်နယ်မတိုင်မီက အင်ဒိုနီးရှားကို ၁-၂ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့သေးတာမို့ ထိုင်းအသင်းရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်အကောင်းဆုံးကစားနိုင်စွမ်းဟာ ထူးခြားလှပါတယ်။
ဒီရွှေတံဆိပ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး Esports ရွှေတံဆိပ်ပါ။ ဂရင်းဖိုင်နယ် ပထမဆုံးပွဲမှာ ထိုင်းအသင်းကို အနိုင်ရဖူးတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဟာ ယခင်ပွဲတွေလိုပဲ ဖိအားပေး ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွဲရဲ့ ဒုတိယပိုင်းက စ လို့ ထိုင်းအသင်းက စတင် လက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ထိုင်းအသင်းရဲ့ ကစားကွက်များကို အင်ဒိုနီးရှားဟာ ပြန်လည်ခုခံခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပွဲနဲ့ တတိယပွဲများကိုပါ အရှုံးပေးလိုက်ရပြီး ထိုင်းတို့ ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
Dota 2: Sibol – Dota2(ဖိလစ်ပိုင်)
ဆီးဂိမ်း Dota2ပြိုင်ပွဲမှာ အိမ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင်အသင်း Sibol က ထိုင်းအသင်းကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင်ရပြီး ၂ခုမြောက် Esports ရွှေတံဆိပ်ကို ဆွတ်ခူးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်အသင်း Sibol ရဲ့ Dota2ကစားသမားများကတော့ MDL Chengdu Major ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း Team Adroit က ခေါ်ယူထားတဲ့ Natsumi-, Mac, Bok, Boombacs နဲ့ cml တို့ဖြစ်ကြပြီး အရံကစားသမားအဖြစ် Cignal Ultra ရဲ့ Erice နဲ့ Van တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်အသင်းက အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ထိုင်းအသင်းမှာ Fnatic ရဲ့ ကစားသမား Jabz နဲ့ 23savage တို့လို နာမည်ကြီး ကစားသမားများ ပါဝင်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လှတဲ့ Dota2မှာ ယခုလို ရွှေတံဆိပ်ရရှိနိုင်ဖို့ ဖိလစ်ပိုင်အသင်းဟာ လေ့ကျင့်မှုများနဲ့ ပြင်ဆင်မှုများစွာ ပြုလုပ်ထားခဲ့တာပါ။
ရွှေတံဆိပ်ရသွားခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် Dota2အသင်းနဲ့ မြန်မာအသင်း Team Veteran တို့ဟာ အုပ်စုပွဲများအတွင်း တွေ့ဆုံကစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဆီးဂိမ်း Dota2ပြိုင်ပွဲအတွင်း မြန်မာအသင်းဟာ ကံမကောင်းစွာ အုပ်စုအဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရပေမယ့် ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကို ၁-၁ နဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး မခေကြောင်း ပြသထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Starcraft II: Cavair “EnDerr” Acampado (ဖိလစ်ပိုင်)
ဆီးဂိမ်း Starcraft II ပြိုင်ပွဲမှာ ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမား Cavair “EnDerr” Acampado က အနိုင်ရပြီး နိုင်ငံအတွက် ၃ခုမြောက် Esports ရွှေတံဆိပ်ကို ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂရင်းဖိုင်နယ်မှာ EnDerr ဟာ ပြိုင်ဘက် စင်ကာပူကစားသမား Blysk ကို ၄-၁ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာပါ။
ပထမဆုံး ၂ ပွဲကို အနိုင်ရပြီး ဦးဆောင်ကစားသွားနိုင်တဲ့ EnDerr ဟာ တတိယပွဲမှာသာ မရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် ၃ ပွဲပြတ်နဲ့ အနိုင်ရသွားနိုင်ပါတယ်။Blysk ဟာ EnDerr ရဲ့ rushed playstyle ကို ခုခံနိုင်ဖို့ တတိယမြောက်ပွဲမှာ playstyle ပြောင်းလဲကစားခဲ့ပါတယ်။ အကြိတ်အနယ်ကစားခဲ့ကြတဲ့ တတိယပွဲအဆုံးမှာ Blysk က တစ်ပွဲပြန်လည်အနိုင်ရလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ၂ ပွဲမှာတော့ EnDerr ရဲ့ နည်းဗျူဟာများဟာ Blysk ထက် သာလွန်နေခဲ့သလို ပြိုင်ဘက်ရဲ့ base ကို အနိုင်ရဖို့ Zergs အရေအတွက်များပြားအောင်လည်း စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ EnDerr ကို အနိုင်ပေးလိုက်ရတဲ့ Blysk ဟာ ငွေတံဆိပ်နဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။
Tekken 7: Nopparut “Book” Hempamorn (ထိုင်း)
ဆီးဂိမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ် Esports ပွဲဖြစ်တဲ့ Tekken7မှာ ရွှေတံဆိပ်ရရှိခဲ့သူကတော့ ထိုင်းကစားသမား Nopparut “Book” Hempamorn ပါ။ Book ဟာ ပြိုင်ဘက် အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမား AK ကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင်ရရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ၂ခုမြောက် Esports ရွှေတံဆိပ်ကို ရယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဆီးဂိမ်း Tekken7ဂရင်းဖိုင်နယ်ရဲ့ ပထမ ၃ ပွဲဟာ Akuma mirror match များပါ။ ပထမဆုံးပွဲကို AK က အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယနဲ့ တတိယပွဲများမှာတော့ Book က နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ စတုတ္ထပွဲမှာ AK ဟာ Shaheen အဖြစ် ပြောင်းလဲကစားခဲ့ပြီး ပြန်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ပဉ္စမြောက်နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ်ပွဲမှာတော့ last-minute attack အတွက် လောနေခဲ့တဲ့ AK ကို Book က ကပ်ခါသီခါအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီး ဆီးဂိမ်း Esports အတွက် နောက်ဆုံးပိတ် ရွှေတံဆိပ်ကို ဆွတ်ခူးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆီးဂိမ်း Esports မှာ ငွေတံဆိပ်နဲ့ ကြေးတံဆိပ်ရရှိသွားကြတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ကစားသမားများ စာရင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြပါတယ်။
MLBB ငွေတံဆိပ် – အင်ဒိုနီးရှား (Adriand Larsen Wong, Eko Julianto, Gustian, Muhammad Ridwan, Teguh Imam Firdaus, Yurino Putra)
MLBB ကြေးတံဆိပ် – မလေးရှား (Ahmad Ali Huzaifi Abdullah, Abdul Wandi Abdul Kadir, Jamil Nurolla, Izme Haqeem Hamsjid, Muhammad Hazeem Onn, Mohd Faris Zakaria)
Hearthstone ငွေတံဆိပ် – ထိုင်း (Werit Popan)
Hearthstone ကြေးတံဆိပ် – စင်ကာပူ (Chew Khai Kiat)
AoV ငွေတံဆိပ် – အင်ဒိုနီးရှား (Farhan Akbari Ardiansyah, Gilang Dwi Falah, Hartanto Lius, Hartawan Muliadi, Satria Adi Wiratama)
AoV ကြေးတံဆိပ် – ဗီယက်နမ် (Đỗ Thành Hưng, Huỳnh Trọng Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Phương Nguyên, Nguyễn Vũ Hoàng Dũng, Vương Trung Khiên)
Dota2ငွေတံဆိပ် – ထိုင်း (Anucha Jirawong, Anurat Praianun, Pipat Prariyachat, Nopparit Prugsaritanon, Thanathorn Sriiamkon, Nuengnara Teeramahanon, Poomipat Trisiripanit)
Dota2ကြေးတံဆိပ် – ဗီယက်နမ် (Huỳnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Châu Lợi, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Thành Đạt, Trịnh Văn Thọ)
Starcraft II ငွေတံဆိပ် – စင်ကာပူ (Thomas Maria Kopankiewicz)
Starcraft II ကြေးတံဆိပ် – ဗီယက်နမ် (Trần Hồng Phúc)
Tekken7ငွေတံဆိပ် – ဖိလစ်ပိုင် (Alexandre Gabrielle Laverez)
Tekken7ကြေးတံဆိပ် – ဖိလစ်ပိုင် (Andreij Hosea Albar)
အိမ်ရှင် ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာ ဆီးဂိမ်း Esports မှာ ရွှေတံဆိပ် ၃ခု၊ ငွေတံဆိပ် ၁ခုနဲ့ ကြေးတံဆိပ် ၁ခု ရယူနိုင်ခဲ့လို့ ရွှေတံဆိပ်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းက ရွှေ ၂ခုနဲ့ ငွေ ၂ခု၊ မလေးရှားက ရွှေ ၁ခုနဲ့ ကြေး ၁ခု၊ အင်ဒိုနီးရှားက ငွေ ၂ခု၊ စင်ကာပူက ငွေ ၁ခုနဲ့ ကြေး ၁ခု၊ ဗီယက်နမ်က ကြေး ၃ ခု အသီးအသီး ဆွတ်ခူးထားနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
ထိုင်းဟာ Esports ရွှေတံဆိပ် ၂ခုရခဲ့လို့ ဖိလစ်ပိုင်ပြီးရင် ဒုတိယမြောက် Esports ရွှေတံဆိပ်အများဆုံးရတဲ့နိုင်ငံအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Esports သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ထူးခြားလှတဲ့ ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်း Esport ပွဲများကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။